Vavakidzani Vakafadzwa Nekuona maBhaibheri Airatidzwa kuBrooklyn Heights
MUSI wa7 na8 May 2016, munzvimbo inosvikira vaenzi pamahofisi makuru panhamba 25 Columbia Heights, muBrooklyn, kuNew York, maiva nechipatapata. Kunyange zvazvo zvakanga zvisingagari zvichiitika kuti vanhu vauye pakupera kwevhiki kuzoona nzvimbo iyi nekuratidzwa zvinoitwapo, misi iyi vavakidzani vanogara pedyo neBheteri vakanga vakokwa kuti vauye kuzoona nzvimbo yaiva nemaBhaibheri ekare kare.
Mushandirapamwe wekukoka vanhu wakaitwa wakapa uchapupu hwakanaka chaizvo munharaunda yacho, uye vaya vakabatanidzwa mumushandirapamwe uyu vakanakidzwa chaizvo. Zvaikurudzira chaizvo kunzwa zvakanaka zvaitaurwa nevanhu vatakanga takavakidzana navo kwenguva refu.
Mumwe murume akati: “Kubvira kuma1960, ndakagara panzvimbo dzakasiyana siyana [dzakapoteredza Bheteri], asi handisati ndamboona vavakidzani vakanaka semi. Tichakusuwai chaizvo, taisada kuti muende.”
Mumwe mukadzi akati: “Dai makanga musipo nharaunda ino ingadai isina kubudirira sezvayakaita. Takagarisana nemi zvakanaka chaizvo kwemakore ese aya adarika.”
Mapiyona akawanda aishanda mundima yacho akabayiwa mwoyo neushamwari hwairatidzwa nevavakidzani ava uye kufarira kwavaiita kuparidzirwa. Mumwe murume aigara munharaunda yacho uye aironga zvinoitwamo, akatenda sangano redu chaizvo uye akati akarwadziwa kuti urongwa uhwu hwaizoitwa panguva yaaizenge asiri mutaundi racho.
Urongwa uhwu hwakakurudzira vakawanda. Mumazuva iwayo maviri chete, vanhu 48 vasiri Zvapupu vakauya kuzoona nzvimbo yacho yaiva nemaBhaibheri. Pamazuva iwayo, paiva nevashandi vakati kuti vepaBheteri vaigamuchira uye vaitaura nevavakidzani munzvimbo inosvikira vaenzi.
Mumwe mukadzi anonzi Sally uyo ava kuda kusvitsa makore 30, akaita maminitsi anenge 30 aripo. Paakauya, mapiyona akanga amukoka aivawo panzvimbo inosvikira vaenzi. Sally akati haana kumboziva kuti vanhu vairatidzwa maBhaibheri. Mapiyona acho akamuudza kuti zvaifadza kuona munhu akadzidza zvakadaro anokoshesa Bhaibheri. Sally akati: “Ibhuku rinokosha chaizvo. Hapana kumwe kwatingawana mashoko aMwari kunze kwemuBhaibheri. Ndiro rine mashoko anotibatsira muupenyu.”
Sally akataura kuti maonero aanoita Bhaibheri akamupa chido chekudzidza chiLatin nechiGiriki, uye kuti anofarira zvekushandura. Akatiwo kushandura zvakarurama kunokosha kuitira kuti mashoko acho asakanganiswa nemaonero emumwe munhu. Mapiyona acho paakaudza Sally kuti pawebsite yedu yejw.org pane mashoko anobva muBhaibheri akashandurwa mumitauro inodarika 800, Sally akaoma mate mukanwa. Pavakamutsanangurira zvakaitwa nevamwe vashanduri pazita raJehovha, akashamisika ndokubvunza kuti, “Zita raJehovha rinobvisirwei muBhaibheri?” Paainge ava kuenda, Sally akati, “Muri vavakidzani vakanaka chaizvo, ndaizviona hangu kubvira ndichiri mudiki.”
Mangwana acho musi weMuvhuro, mumwe mufundisi akaenda kuna John, mushandi wepaBheteri uyo aiparidza nechingoro pedyo nepaBheteri. Akaudza John kuti akanakidzwa nekushanya kwaakaita kuBheteri, uye kuti akafarira kuti tinonyatsotevedzera zviri muBhaibheri. Pashure pekunge vati kurukurei, mufundisi wacho akabva angoti, “Zvapupu zvandigumbura chaizvo!” John akanetseka ndokubvunza chaiita kuti adaro. “Nekuti mava kutama! GARAI MUNO! Chingotengai zvivako zvakakura, kana kuvaka chero zvamunoda, asi muchigara muno. Ndimi munotodzikamisa zvinhu munharaunda ino. Zviri kundirwadza chaizvo kuti mava kubva muno muchienda kumusoro uko!”
Tichitarisa zvese zvakaitika, tinoona kuti mushandirapamwe wekukoka vanhu kuti vazoona zvaiva paBheteri uye kuratidzwa kwakaitwa vanhu nzvimbo yaiva nemaBhaibheri, zvakapa uchapupu hwakanaka munharaunda yacho. Vavakidzani vakaudzwa nezvezita raMwari kudarika zvakanga zvamboitwa.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Handisati Ndamboona Vavakidzani Vakanaka Semi”